Lasibatrin’ny fiakaran’ny rano ny fokontany mangarano I sy II ary andranomadio
Nirongadra ny aretin-koditra
Velontaraina ny mponina amin’iny fokontany Mangarano I sy Mangarano II ary Andranomadio iny, nohon’ny fiakaran’ny rano nandritran’ny firotsahan’ny orana teto Toamasina nandritry ny 4 andro nifanesy, tamin’iny herin’andro lasa iny. Araka ny nambaran’ny Rtoa Sana Madeleine, mponina amin’iny faritra iny dia manomboka ny volana janoary no fiakaran’ny rano ka hatramin’ny volana may any vao ritra tanteraka izany isan-taona. Nisy ihany lalan-drano taloha fa efa tapitra totofan’olona avokoa anorenana trano ka miparitaka sy mameno ny manodidina ny rano, ary efa misy trano dobo tanteraka mihitsy aza. Mangarano raha teo mantsy saika oraka ihany sy faritra hiva amin’ny ankapobeny. Vokany atreny andohalika ny rano raha vao vantany manorana roa andro monja aza.
Tonga ny aretik’oditra toy ny olampotaka,ny parasikankana sy ny lagaly ,arak’izao hita amin’ny sary izao; eo ihany koa ny fahasahiranan’ ny renimpianakaviana maro amin’ny fanaterana ny sy fakana ny mpianatra any ampianarana, rehefa miakatra ny rano.
Misy ny ezaka nataon’ny lehiben’ny fokotany amin’ny famerenana sy fanaovana ny lalan-drano, amin’ny alalany fifampiresahana amin’ireo olona nanatototra, saingy misy amin’ireo olona ireo no tsy manome lalana andehanan’ny rano; hany ka mitazampotsiny sisa no azo atao.
Ary nambaran’ny Chef Fokotany fa tokony misy tatatra andehanan’ny rano manomboka avy any amin’ny Eglise Saint Paul Mangarivotra ka mihafara any Ambodisaina, ary avy Ambalamanasy mipaka hatran’ny amin’ny Port-sec. Hatreto aloha dia very fanahy mbola velona ihany ny mponina satria miandry izay fotoana maha ritra ny rano ihany zay vao afaka ny rano.
(20) Prud′homme RAKOTOSON : 10-03-2014 - 10:00